အဖြေလေးတစ်ခု ရချင်ပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဖြေလေးတစ်ခု ရချင်ပါတယ်
Posted by ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ on Sep 30, 2011 in Creative Writing | 17 comments
…ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကိုပြန်ကြည့်ပါလျှင် ဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်လို့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားတယ်ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံရှိပါသလဲ ?
…၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ် ၂၈၈ မှာ ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး တွေကို ဆက်လက်တာဝန်
.ပေးအပ်ထားခြင်းမှာ ဘာသဘောလဲ ?
…လွှတ်တော် (၃) ရပ် ဟာ ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်ခံတွေ ဖြစ်ပီး အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုသာလျှင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ
. ကိုသာလျှင်အုပ်ချုပ်ခိုင်းမြဲ ခိုင်းနေမယ်ဆိုပါလျှင် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား ညီညွတ်မျှတမယ် ထင်ပါသလား ?
…ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး များကို လွှတ်တော်မှာ ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် ဥပဒေပြုကြပေမဲ့ ခရိုင်/မြို့နယ်
.အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများကို ဘာကြောင့်ပြန်လည်မရွေးချယ်ပါသလဲ ?
…အသက်အရွယ်ကြီး ရပ်မိရပ်ဖ(၅)ဦး ဒိုင်ကော်မရှင် သတ်မှတ်ပေးထားပါလျှင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာ ကောင်းကျိုး
.အတွက် သင့်တော်လျှော်ကန်ပါမည် ထင်ပါသလား ?
…လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ပုံစံသည် လက်ရှိ အာဏာရရှိထားသည့် ပါတီကို အင်အားချိနဲ့
.အောင် (ရေသောက်မြစ်ဖြတ်) လုပ်နေခြင်းကို ကြိုဆိုရပါမည်လား ?
စမ်းသပ်ရေးခြင်းဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သည်များကို ပြုပြင်ပေးပါခင်ဗျာ
View all posts by ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ →
post တင်တာ မှားသွားလို့ ၂ ခုထပ်သွားပါတယ်။ဟိုတစ်ခုကို ပြန်ဖျက်ပေးကြပါခင်ဗျား။
ဖြေချင်စရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မဟုတ်လို့ …. ။
ဖြေရလောက်တဲ့ အဖြေမရှိလို့ … မဖြေတော့ပါဘူး ဗျို့:D :D :D
ဒီနေရာမှာ အခန်း(၅)အုပ်ချုပ်ရေး မှာပုဒ်မ ၂၈၈မှာ ခရိုင်သို့ မဟုတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေးရန် ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ ကိုမရဘူး။ အမှန်တော့ အနိုင်ရပါတီရဲ့ မြို့နယ်သို့ မဟုတ် ခရိုင်တာဝန်ခံကို ပိုတာဝန်ပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ဝင်ပြီးတချို့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်လုပ်နေသူတွေရှိသလို၊အာဏာရူးပြီးလုပ်နေသူတွေလဲရှိတယ်။သို့ ပေမယ့် အကောင်းကိုဦးတည်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် လက်ခံပေးဖို့ အသင့်ပါဘဲ။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေထဲမှာ ရပ်ရွာအတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေတွေ့ နေရလို့ ပါ။
တဖက်မှာလဲ ပြန်တွေးကြည့်ရင် ဒီလို ခရိုင်တို့မြို့နယ်တို့ မှာ ဒီစနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးလာတာ အရင် မဆလာ လို့ ခေါ်တဲ့ မဆလ ခေတ်၊နဝတ၊နအဖခေတ်အဆက်ဆက် ခေါက်ရိုးကျိုးဒီ စနစ်အစား အနိုင်ရပါတီကိုလွှဲပေးလိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။ ပုဒ်မ ၂၈၈ ကဆိုသလို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီအလုပ်က ပါတီစုံစနစ်မမည်ပါဘဲ တစ်ပါတီစနစ်ရဲ့ လက်ကျန်အမွေဆိုးသာလျှင်ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အခန်း(၅) အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပုဒ်မ ၂၈၈ နဲ့ ၂၈၉ မှာ ရေးထားတာနော်။ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံမဟုတ်ဘူး။ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေရေးထားတော့
မတတ်ဘဲနဲ့ ဝင်ဝေဖန်ရတော့ မှားရင်လဲခွင့်လွှတ်ဖို့ မလိုဘူး။ပြောစရာရှိတာမို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဝင်ရေး မိပီ။
တို့ ကတော့…ဒါမျိုးမေးခွန်းတွေ..ကို သိပ်မဖြေချင်သေးဘူးကွယ်…။
ကိုယ်..ဘာမှ မသိသေးလို့ ပါ..
ရပါတယ် အကိုလေး အမလေးတို့ ကျေးဇူးပါ မဖြေချင်ဘူးဆိုပေနဲ့ ဖြေလိုက်သလိုပါပဲ
ဒီမေးခွန်းမျိုး ဆတ်ဆော့ပီး မေးမိလို့ တစ်မျိုးတော့မထင်စေလိုပါ
ကျနော်က ဘုံမဝင် ဆုံမဝင် ဟိုမရောက် ဒီမရောက် လမ်းခုလတ်ကလူပါ
ဒါနဲ့ အကိုလေးသန်းထွဋ်ဦးက ဟိုပါတီ ဘက်တော်သားများလား ?
ဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်ရင် အဲဒီဝန်ထမ်း တိုးတက်ကောင်းစားသွားမှာသေချာတယ်၊
ဆက်လက်တာဝန်ပေးတာက ရွှေကြာပင်တွေကို အယုံအကြည့်မရှိလို့ပေါ့ ဟ၊
သူတို့ပဲ အုပ်ချုပ်လိုက်တော့မှ နဂို အတိုင်း ဖြစ်ပေတော့မပေါ့ကွယ်၊ ညီညွတ်ပေတာပ၊
ခရိုင်မြို့နယ် အဆင့်တွေက မြဲနေအောင် လိုင်းကြေးပေးပီးသားလေ၊
အောက်ဆုံးက မေးခွန်းတော့ ဆက်ရွှီးလို့မရနိုင်တော့လို့.. ဒါလေးများ ။
တစ်ခု ကို မှ မဖြေတတ်လို့ 
ပြန်ဖြေပေးပါ ဗျို့ 
ဘယ်ပါတီ ဝင်မှမဟုတ်ဘူး။ခုချိန်ထိ မည်သည့်ပါတီမှ မထောက်ခံသလို ဘယ်တုန်းကမှမဲမပေးခဲ့ဘူး။ရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ် စစ်အာဏာရှင်သာ
မရှိတော့ရင် ဘယ်သူ လုပ်လုပ်ထောက်ခံမှာပါ။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း လိုအပ်ချက် အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကို စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ရှာဖွေပြီး မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကောင်းများနဲ့ ကိုယ်ကျိုးမရှာပဲ ဖြေရှင်း မယ်ဆိုရင် လာမဲ့၁၀နှစ်အတွင်း သိသာစွာ တိုးတက်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျိုးက မရှာဘူး ဆိုရင်တောင် အယင်ကရဲ့ တစ်ဝက်လောက်တော့ ကျန်နေဦးမှာလေ၊
ဆိုလိုတာက တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမို့ နှစ် ၂၀ အနည်းဆုံး စောင့်ရမလားပဲ။
ကျနော်အမြင်ကတော့တကယ်နည်းလမ်းမှန်ရင် အလွန်ဆုံး၁၀နှစ်ပါပဲ။ မကျော်စေရပါဘူး။
မြို့မိမြို့ဖ ဖွဲ့စည်းဖို့ကတော့ မဖြစ်မနေ မဟုတ်ပဲ ဖွဲ့စည်းလိုတဲ့ရပ်ကွက်တွေ ရပ်ကွက် လူထုသဘောထားနဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်ဆိုရင် မဆိုးဘူးထင်တာပဲ။
=ဒီမှာပြောတာက ၀န်ထမ်းဆိုတာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာမဟုတ်ပဲ အစိုးရ တိုက်ရိုက်ခန့်သူလို့ ဆိုချင်ပုံရပါတယ်။ အမှန်တော့ ယနေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နေရာတိုင်းကို ပြည်သူ့ဆန္ဒယူရတဲ့ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူက ယုံကြည်/ရွေးချယ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက အစိုးရဖွဲ့ပေးပြီး အဲဒီအစိုးရကပဲ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ကြတာပါ။ အစိုးရဆိုတာလဲ ၀န်ထမ်းပဲမို့ ၀န်ထမ်းအုပ်ချုပ်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်ပါတယ်။ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ပြီး တိုင်းပြည် တိုးတက်ကြီးပွားဘို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။
=အဲဒါက အစိုးရယန္တယားပုံစံကိုရော လူကိုရော မပြောင်းတဲ့သဘောပါ။ သဘောအားဖြင့်တော့ အစိုးရယန္တယားပုံစံဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လည်ပတ်နေရတာမို့ ပြောင်းချင်ရင်တောင်မှ ချက်ချင်းရပ်ပြီး ပြောင်းလို့တော့မရပါဘူး။ ရှိဆဲယန္တယားအတွင်းမှာပဲ ပုံစံသစ် လူသစ်ကို တည်ဆောက်ပြင်ဆင်ပြီး ပြောင်းရမှာပါ။ အခုကိစ္စကတော့ သူတို့ မြှုပ်နှံထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို ဆက်ထားချင်လို့ကို မပြောင်းတာပါ။
=ခေါင်းပိုင်းကိုတော့ လူကိုလဲ ရွေးချယ်ခံစေပြီးပြောင်းမယ်၊ မူကိုလဲ ချက်ချင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှု ယန္တယားတခုလုံးကိုတော့ ရွေးချယ်ခံစေဘို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘယ်စံနစ်မှာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရက ခန့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သာ လည်ပတ်ရမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ US နဲ့ အချို့နိုင်ငံတွေမှာလို မြို့တော်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေ ရွေးချယ်စေတာမျိုးကတော့ လူကျေနပ်အောင် ခေါင်းရွေးခိုင်းတာပါ။ ကိုယ်ပိုင်းက အစိုးရစည်းမျဉ်းအတိုင်း အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရခန့်ဝန်ထမ်းတွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။
=ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး များကိုရွေးချယ်ဘို့က အဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် ကိစ္စမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ အရင်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ အစိုးရကို လုံးလုံး အယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေတာမို့ လူထုနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့ နေရာမှာ လူထုရွေးသူကိုထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ အဲဒီလူထုရွေးသူဟာ အုပ်ချုပ်မှု့ ပညာ အတွေ့အကြုံ ဥပဒေအမြင် စတာတွေ အားနည်းရင် မကောင်းတဲ့ရလာဒ် ထွက်နိုင်ပါတယ်။ မဆလ ခေတ်က ပြည်သူ့ကောင်စီတွေကိုကြည့်ပါ။ ပါတီဝင်လူစွာတွေက ရပ်ကွက်ကောင်စီ မြို့နယ်ကောင်စီမှာတက်လူပ်/- အုပ်ချုပ်ရေး တရားစီရင်ရေးတွေကို မလုပ်တတ်ဘဲလုပ်တော့ မဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်မှု့ပညာ စီမံမှု့ပညာ တရားစီရင်မှု့ပညာ ဥပဒေပညာတွေဆိုတာက သတ်သတ်သင်ရတာမျိုးပါ။ ကျွန်တော်တို့က စစ်အုပ်ချုပ်မှု့အောက်မှာ မျိုးဆက်နှစ်ဆက်နေခဲ့ရတော့ စစ်သားတွေက သူတို့အကုန်လုပ်တတ်တယ်ထင်ပြီး နေရာယူထားတာကို မျက်စေ့အကျင့်ပါနေပါတယ်။
=အကြံပေးအတွက်၎င်း၊ နာယကအဖြစ်၎င်း ထားလျှင် သင့်တော်ပါတယ်။
Ko Ko Aung က ကျနော် ဝိုးတိုးဝါးတား ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို
ထင်းကနဲ မြင်သာအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ….
ကျွန်တော် မောင်တုတ်ကြီး နှာစေးနေပါတယ်။ရမ်းသန်းဝေဖန်ရင် အပြစ်တော့ကြီးတယ်။သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။
အဖြေရချင်တာလား ၊ပြဿနာရှာတာလား အကို rocket ခ rappermg ရေ။